>8888 - 20 Years - Thet Win Aung
>ပၝကင်္စတန် စစ်ဗိုလ်ခဵပြ်ုကီး အာဏာသိမ်ူးပီးရင်းသိမ်း
တောင်းပန်ပါတယ် ၀န်မင်းရယ် ကာတွန်း အောင်မော် နုိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၃ ကာတွန်းအောင်မော်ဖေ့ဘုတ်ခ်မှ ပြန်လည်ကူးယူပါသည်။ Tags: အင်တာဗျူး Related posts ငြိမ်းချမ်းရေး…. ဟိုး… အဝေးမှာ (၄) – Aung Din (0)...
သိချင်လုို့ပါဗျာ ကာတွန်း – Ath သြဂုတ် ၁၂၊ ၂၀၁၃ ကာတွန်း Ath ဖေ့ဘုတ်ခ်မှ ပြန်လည်ကူးယူပါသည်။ Tags: အင်တာဗျူး Related posts ငြိမ်းချမ်းရေး…. ဟိုး… အဝေးမှာ (၄) – Aung...